लक्ष्मीको बम्पर र सानिमाको हकप्रद अफर छुट्ला नि !
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडको सतप्रतिशत हकप्रद पाउन चाहना भए आजै गएर यो बैंकको सेयर खरीद गरिहाल्नुुहोस् । कारण, यो बैंकले सतप्रतिशत हकप्रदका लागि चैत १८ गते(भोलि)लाई बुक क्लोजको मिति तोकेको छ । यसको अर्थ चैत १७ गते(आज)सम्म यो बैंकको सेयर खरीद गरेका वा आफ्नो नाममा नामसारी गरेकाहरुले मात्र सतप्रतिशत हकप्रदका लागि आवेदन दिनसक्नेछन्...
दुुई वाणिज्य बैंक पौने ५ करोड हकप्रद जारी गर्दै
काठमाण्डौ । दुुई वाणिज्य बैंकले पौने ५ करोड(४ करोड ७५ लाख) भन्दा बढी कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएका छन् । लक्ष्मी बैंकले ३ करोड १५ लाख ९० हजार ३ सय ३ कित्ता र सानिमा बैंकले १ करोड ५९ लाख १७ हजार ६ सय १७ कित्ता हकप्रद निश्कासन गर्न लागेका हुुन् । यी दुवै बैंकलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले हकप्रद निश्कासनको अनमुति दिएको छ । सानिमा...
लक्ष्मी बैंंकले ल्यायो 'अनफिक्स्ड खाता': मुद्धतीको लाभ, बचतको सुविधा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले अनफिक्स्ड डिपोजिटग (Unfixed Deposit) नामक एक नयाँ मुद्दती खाताको सुरुवात गरेको छ । ग्राहकहरुलाई मुद्दती खाताका साथसाथै बचत खाताका लाभहरु जस्तै, तरलता र उच्च ब्याजदर दुवै प्रदान गराउने उद्देश्यले यस खातालाई ग्राहकहरुमाझ ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । अनफिक्स्ड डिपोजिट खाताले ग्राहकहरुको जम्मा रकमलाई उक्त खातामा...
लक्ष्मी बैंकको डबल अफर, सतप्रतिशत हकप्रद लगत्तै बोनस पनि
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडको १ सय प्रतिशत हकप्रद निश्कासन सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल धितोपत्र बोर्डको हकप्रदको पाइपलाइनमा आएको छ । यो बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल ३ करोड १५ लाख ९० हजार ३ सय ३ कित्ता हकप्रद निश्कासनको माग गरी बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमीटेड लक्ष्मी बैंकको हकप्रद निश्कासन तथा...
खूद नाफातर्फ लक्ष्मीको राम्रो प्रगति
काठमाण्डौ । चालुु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा लक्ष्मी बैंकले खूद नाफातर्फ राम्रो प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्षको दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यो वर्ष सोही अवधिमा खूद नाफा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्ष ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको खूद नाफा बढेर ४५ करोड ३१ लाखको उचाईमा पुुगेको हो । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको...
शाखा बिस्तार गर्दै लक्ष्मी बैंक, छोटो समयमै फरक पहिचान
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले बुधबारदेखि काठमाण्डौको पुरानो बानेश्वरमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । योसँगै काठमाण्डौ उपत्यकामा लक्ष्मी बैंकको कुल शाखा संख्या १६ पुुगेको छ । देशभर अब लक्ष्मी बंैकको शाखा सञ्जाल ६५, एक्सटेन्सन काउण्टर ३ र एटीएम काउण्टरको संख्या ८१ पुुगेको छ । शाखा बिस्तारसँगै आफूहरुले दिने सेवालाई अझ...
प्रोफेसनलाई किनेको लक्ष्मी बैंकको एकीकृत कारोबार, चाँडै सतप्रतिशत हकप्रद
काठमाण्डौ । प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकलाई प्राप्ति(एक्वीजिसन) गरेपछि लक्ष्मी बैंकले आइतबारदेखि एकीकृत बित्तीय कारोबार सुरु गरेको छ । एक समारोहका बीच लक्ष्मी बैंकको एकीकृत कारोबार सुुरु भएको हो । यी दुुई संस्थाको एक्वीजिसनका लागि तयार डिडिए रिपोर्टका क्रममा लक्ष्मी बैंकको एकसय कित्ता सेयर बराबर प्रोफेसनलको ५० कित्ता सेयर स्वाप...
लक्ष्मी बैंकले ३८ प्रतिशत लाभांश दिने, हकप्रद भरेकाले पनि पाउने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई ३८ प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । पुस २७ गते सम्पन्न बैंकको १८३ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खूद नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई ३८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको निर्णय गरेको हो । यो निर्णय नियामक नेपाल राष्टबैंक र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र...
पहिलो त्रैमासमा लक्ष्मी बैंकको कमालको प्रगति
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खूद नाफातर्फ राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ । यो बैंकले खूद नाफा ४२.१६ प्रतिशतले बढाएको हो । बिहीबार बैंकले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ११ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको खूद नाफा यो वर्ष सोही...
अर्ब क्लबमा परेन लक्ष्मी बैंक, ६१.८८ प्रतिशतले नाफा वृद्धि
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा खूद नाफातर्फ ६१.८८ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो अवधिमा लक्ष्मी बैंकले ६७ करोड ३७ लाख खूद मुनाफा आर्जन गरेको हो । यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१ ७२ मा ४१ करोड ६१ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले आब. ०७२/७३ मा ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४० अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह...